Abakhiqizi bensimbi engagqwali - Abakhiqizi basechina baseChinese, Abathengisi
Qhathanisa nomugqa wensimbi engagqwali ogoqiwe obandayo, isiqeshana esigoqiwe esishisayo sijiyile ezinye, futhi umugqa oshisayo oshisayo uvame ukubukeka umhlophe ngaphandle kokukhanya, kepha amakhaza asongwe ngokukhanyayo okuncane.
Imvamisa ukucacisa umkhiqizo wensimbi engagqwali umumo we-strip kusuka kwimboni yempahla, ngenxa yobuningi be-strip ubukhulu buzacile, ngakho-ke ukwakheka komugqa kulula ukukupakisha, ukuthutha nokusebenza.
Imvamisa sibiza umucu lapho ububanzi bensimbi engagqwali bungaphansi kuka-600mm, ikhoyili yokushaya lapho ububanzi bomsongo bungaphezulu kwama-600mm, kepha kwesinye isikhathi abantu abanandaba nokuningi okuhlukile. Umucu uqhubeka nokusebenza kusuka kwekhoyili futhi ulungele ukwenza izingxenye ezincane ngokusika, ukugxusha, ukugoba, ukushisela, ukubhola njll. Zonke izinhlobo zokucubungula ngomshini.